August 26, 2020 adminLeaveaComment on यो देश झ,ण्डा ज.लाउनेहरुले हैन, झ,ण्डा हल्लाउनेहरुले खा.इरहेका छन्,,,,हेर्नुहोस् !
यो झ,ण्डा खा,स जा,त र खा,स ध,र्मकै हो । यो झ?ण्डामा हिन्दू वा,हेकको आ,स्थाको कुनै प्र,तिविम्वन छैन । यसमा कुनै अ,ग्रगामी या लो,कतान्त्रिक त,त्व पनि छैन । यो झ,ण्डामा सात सालदेखि त्रिसठ्ठी सालसम्म ल,ड्ने र मृ,त्युव,रण गर्ने म,हान स,हिदहरूको कुनै चि!नो च,पेटो छैन ।
नि,तान्त धार्मिक मा,न्यता तथा हिन्दू,हरूका आ,रा,ध्यदेवहरूका प्रति,क छन् यसमा । त्यो भन्दा बढी छ भने चन्द्र वं,शी र सू,र्यवंशी राजाहरूको कुरा छ । ग,णतन्त्र ल!खर ल,खर एक था!न गीत बो,केर आयो । त्यसैले पुरानै झ,ण्डाले हामीले चि,त्त बुझाउनु परेको छ। त्यसो भनेर झ,ण्डा ज,लाएर भ,लो हुन्छ त ? अहिले यो देशको झ,ण्डा पनि हो भनेर बुझौं है । ज,लाउनै पर्ने त सि,ङ्गै रा,ज्यस,त्ता पो हो !
यसरी झ,ण्डा ज!लाएपछि सबैभन्दा उ,त्तेजित भ्र,ष्ट तथा नि,रङ्कुश राज्य स,त्ता हुन्छ । त्यसपछि “रा!ष्ट्रवा,दी”हरु उ,त्तेजित हुन्छन् । समाजका घो,र द,क्षिणपन्थीहरूले फू!र्तिफा!र्ती गर्ने अना,व,स्यक अ,वसर पाउछन् । झण्डासँग जो,डिएर इमा,न्दार देशभक्तहरू पनि रि!सा,उछन् । किनकि जति नै झु,र भए पनि झ,ण्डाले देशको भा,वनाको प्र,तिनिधि!त्व गरेको हुन्छ ।
म यो देशका उत्पी,डित जाति तथा विभिन्न समुदायको दिलभित्र उ,म्लि,रहेको वि,द्रोहको म्या,ग्मालाई थोर ब,हुत अनु,भूति गर्छु ।त्यसैले शा,न्त तरिकाले यो मैत्री,पूर्ण सु,झाव दिएको छु । राष्ट्रिय झ,ण्डा ज,लाएको सामाग्रीबाट उ,त्तेज?नामा आउनु भएका मि,त्रहरूलाई पनि म अ,पिल गर्छु कि – यही देशका भाइ-बैनीहरू जसको आ!त्मा कै,यन ऐ,तिहासिक कारणले वि,थोलिएको छ । उनीहरूलाई अ,भद्र गा,,ली गरेर होइन बरु प्रे,मपूर्वक दु,खेको घा,ऊमा सु,म्सु,म्याउनोस् र अ,व यसो नग!रौं भनेर सम्झाउनोस् । Point nepal
हामीले भने जस्तो भएन भने लाखौ जनता सडकमा आउछौ,इमान्दारलाइ सम्मान गरौ – ज्ञानेन्द्र साही…हेर्नुहोस।
बरु लोडसेडिङको तालिका आउनसक्छ तर कुलमान आउँदैन,ढुक्क हुनुस : उर्जा मन्त्री रायमाझी